बिष्लेषण रिपोर्ट : अन्सारीले हाँसी हाँसी गिरफ्तारी दिनुको कारण यस्तो पो ! «
बिष्लेषण रिपोर्ट : अन्सारीले हाँसी हाँसी गिरफ्तारी दिनुको कारण यस्तो पो !
प्रकाशित मिति : ११ जेष्ठ २०७६, शनिबार १७:३१
७ करोड ६७ लाख ९४ हजार बराबरको नक्कली भारतीय नोट काठमाडौं भित्र्याएका युनुस अन्सारी सहित अन्य केहि व्यक्तीलाई नेपालको एयरपोर्ट बाट प्रहरीले पक्राउ गर्यो । घटनाको प्रकृती हेर्दा युनुसले प्रहरीले पक्राउ गरेको भन्दा पनि उनले आफ्नै रहरले आत्मसमर्पण गरेजस्तै अनौठो दृश्य देखियो विमानस्थलमा । भारतको सदाबहार सत्रु जस्तै रहेका अन्सारीलाई भारतले नक्कली नोटको पार्यायवाचीकै रुपमा चिन्ने गर्दछ । यस अघि पनि नक्कली भारुको कारोबार गरेर पटक पटक जेल पर्दै र छुट्दै गरेका अन्सारीलाई भारतीय सुरक्षा संयन्त्रले तारो बनाउँदै आएको थियो । जेल भित्रै रहँदा समेत सुटरको आक्रमणमा परेर भाग्यले बाँच्न सफल अन्सारीले बाहिर रहँदा कुनै पनि बेला मारिने सक्ने आकलन गरेरनै जानीजानी प्रहरी बोलाएर गिरफ्तारी दिएको आशंका गरिएको छ ।
नक्कली नोट कारोबारी माथि निर्मम रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारी बहुमतका साथ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने पक्का भएको भोलीपल्टै अन्सारी पक्राउ पर्नुले पनी रहस्यलाई थप पेचिलो बनाएको छ । भारतीय सुरक्षा युनिट बाट कुनै पनि बेला मारिन सक्ने बझेरनै जेल मा भए सुरक्षित बाँच्न सकिने आशाले युनुुस आफैँले गिरफ्तारी दिएको आकलन गरिएको छ । नेपाली टोपीमा सहिजए नक्कली भारतीय
नोट लिन विमानस्थल जाँदा प्रहरीको फन्दामा परेका अन्सारीमा कुनै पनि हिनताबोध थिएन । हाँसीहाँसी गिरफ्तारी दिएका उनले प्रहरीले माक्स लगाउँनु भन्दा पनि माक्स लागाउँन मानेनन् बरु हाँसीहाँसी पत्रकारलाई पोज दिए । मानौँ की प्रहरीले पक्राउ गरेकोमा उनी दुखि होइन खुशि छन् ।
भारतमा नयाँ शक्तिशाली सरकार बने सँगै आफुलाई कुनै पनि बेला मारिन सक्ने अनुमान गरेर नै जेलको यात्रा युनुुसले रोजेको कतिपयको विश्लेषण रहेको छ । बाराका पूर्वमन्त्री एमाले नेता सलीम मिया अन्सारीका छोरा हुन् । उनी पहिलो पटक पक्राउ पर्नुअघि काठमाडौंमा एक निजी टेलिभिजनका सञ्चालक थिए । तर, पक्राउ परेसँगै उनको टेलिभिजन बन्द भएको थियो ।
अन्सारी कुस्ती खेलाडी संघका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् । उनकी बहिनी उषाकिरण पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन एकीकृत माओवादीबाट समानुपातिक सांसद बनेकी थिइन् । प्रहरी अधिकारीहरुका अनुसार उनी पहिले अनौपचारिक कुराकानीमा आफू नक्कली नोटको कारोबारी नभएको दाबी गर्थें । उनी भन्थे, ‘म नक्कली नोटको कारोबारी होइन तर, मलाई जबरजस्ती हो नै भन्छन् भने किन नगर्ने ’
आतंकवाद र गम्भीर प्रकृतिको अनुसन्धान गर्ने निकाय विशेष ब्युरोका एक कनिष्ठ अधिकारी भन्छन्, ‘यो त लु मलाई समात् भनेको जस्तो देखियो ’
तर, अन्सारीको गतिविधि ओपन सेक्रेट भइसकेका उनले मोदीको जीतरहारभन्दा पनि उनी जुनसुकै वेला पनि थ्रेटमा रहने कतिपय अधिकारीको बुझाइ छ ।
भारतीय पक्षले अन्सारीले पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आईएसआईका लागि काम गरिरहेको दाबी गरेको थियो । अन्ततः २६ फागुन ०६७ मा उनीमाथि कारागारभित्रै गोली हानी हत्या गर्ने प्रयास भयो । तर, अन्सारीको भाग्य १ सुटर जसजित सिंहले बोकेको कट्टुमा लुकाएर लगेको बन्दुक पहिलो प्रयासमा पड्किएन ।